Baydhabo oo caawa u soo gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Tartamayaasha Degmooyinka Cabdicasiis Vs Baydhabo oo ka kala tirsan Gobolada Benaadir iyo Baay ayaa caawa tartan aad u xiiso badan ku dhexmaray tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee SNTV iyo Radio Muqdisho, iyagoo muujiyay tartan aad u xiiso badan.
Tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka oo sanadkan uu taaba gelineyo Maamulka Gobolka Benaadir oo ay u noqoneysa sanadkii labaad ee uu tabao geliyo, ayaa kulankii ugu horeysay waxaa caawa tartan aad u xiiso badan ku dhex maray tartamayaasha Degmooyinka C/casiis Vs Baydhabo, iyadoo tartamayaasha labada Degmo ay madasha tartanka ku soo bandhigeen dadaal iyo anshax wanaag inta uu tartanku socday.
Natiijada tartankii quruxda badnaa ee dhexmaray tartamayaasha Degmooyinka C/casiis Vs Baydhabo oo ka kala tirsan Gobolada Banaadir iyo Baay ee caawa waxey noqotay sidan:-
Tartamayaasha Degmada C/casiis sida xeerka Barnaamijka tartan Cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan uu dhigayo waxaa la weeydiiyey Todobo su’aallood, su’aallihii la weydiiyey waxay si sax ah uga jawaabeen Afar su’aal, iyagoo iska qalday saddex su’aal oo ka mid ahayd Todobadii su’aal ee la waydiiyay, Waxayna si ka faa’iideysi ah u heleen Hal su’aal oo soo hareer martay tartamayaasha Degmada Baydhabo, waxaana taasi ka dhigeysaa in ay heleen tartamaayasha Degmada C/casiis 10 dhibcood (Toban dhibcood).
Tartamayaasha Degmada Baydhabo waxaa iyana dhankooda la weydiiyey Todobo Su’aallood, waxaana su’aallihii la weydiiyey ay si sax ah uga jawaabeen shan su’aal oo waxa ay iska qaldeen Labo su’aal, waxa ay si ka faa’iideysi ah ay heleen Hal su’aal oo ay haleeli waayeen tartamayaasha Degmada C/casiis, waxayna wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada Baydhabo ay heleen noqoneysaa 12 dhibcood ( Labo iyo Toban dhibcood).
Hadaba Tartamayaasha Degmada Baydhabo ayaa caawa u soo gudbay wareegga labaad ee tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka, waxaana habeen dambe is arki doono degmooyinka Gaalkacyo iyo Shibis ee ka kala tirsan Gobollada Mudug iyo Banaadir.
Maxamed Macalin Xasan “White-ka”